Xisbiga M: "Waxan mamnuucaynaa dadka dumarka xoriyaddooda saameeya" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tomas Tobé, afhayeenka dhanka sharciga ee xisbiga Moderaterna. sawir: Jessica Gow/TT
Xisbiga M: "Waxan mamnuucaynaa dadka dumarka xoriyaddooda saameeya"
La daabacay tisdag 22 maj 2018 kl 14.22
Xisbiga Moderaterna ayaa soo jeediyey in la mamnuuco dhaqanka ay ku tilmaameen ilaaladda sharaf-dhowrka.
Ilaallada sharaf-dhowrka ayaa lagu sheegay in ay yihiin rag carqalad ku ah xoriyadda dumarka ee xaafadda soo galootigu ku badan yahay sida uu sheegay Tomas Tobé oo ah afhayeenka dhinaca sharciga ee xisbiga Moderaterna.
-Xisbiga Moderaterna waxa uu doonayaa in uu mamnuuco ilaalliyashada sharaf-dhowrka ee siyaabo kala duwan u yareeynaya xoriyadda dumarka, xoriyadda ah in ay cida ay doonayaan la socdaan iyo xoriyadda ah in ay sidii ay doonayaan u labistaan.
Moderaterna waxa ay doonayaan in qofka lagu helo in u faraha kula jiro ilaalinta dhaqanka dumarka ee goobaha dad-weeynaha uu mutaysan karo xadhig saddex sanno ah. Waxa kale oo xisbigan soo jeediyey in booliska la siiyo awood ah in ay si degdeg ah uga mamnuuci karaan qofka dhaqankan saameeya in uu joogo suuqyadda, iyadda oo markaas ka dib maxkamaddu eegi doonto dembiga.
Tirada dumarka ee dhibaatooyinkan la kulma ayaa loo maleeynayaa in ay aad u baahsan tahay.
- Waxa jira warbixino sheegaya in 240 000 oo dhallinyaro ahi ay la nool- yihiin xad-gudub la xidhiidha sharaf-dhowrka , ayuu yidhi Tobé.
Moderaterna waxa ay sheegeen in sharciyadda dhanka hanjabaada la adkeeyn doono. Sharciyadda ay soo jeediyeen waxa ka mid ah in la mamnuuco culeeysyadda amba saameeynta lagu sameeyo qofka si loo ilaaliyo sharafta qooyska iyo in sharci daro laga dhigo dhimida xoriyadda shakhsiga.